ကိုယျ့လီးက မငျးအတှကျပါ – My Blog
သကျနှယျမှာ ခုတဈလောပိုငျး သနျ့ဇငျ့ရဲ့ မစှတျမပှတျ လိုးခကျြမြားကို အားမရတော့ပဲ ဆှပေးသလိုဖွဈကာ ပိုပိုပွီး အလိုးခံခငျြလာသညျ။ သနျ့ဇငျမှေးနတှေ့ငျ သကျနှယျ အရကျမြားသောကျကာ နဲနဲမူးလာခြိနျတှငျ သနျ့ဇငျသူငယျခငျြးတှရေဲ့ ဖောငျးကွှနသေော နရောမြားကိုကွညျ့ကာ ကာမစိတျမြားကွှလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အရကျမြားကို ဖိသောကျပွီး မူးပွဈလိုကျသညျ။ အခနျးထဲ dj မြားဖှငျ့ကာ တဈခနျးလုံး ကခြိနျတှငျ သကျနှယျလဲ အလိုကျသငျ့လိုကျကလိုကျသညျ။ ထိုခြိနျ ကိုနှငျ့အလုပျတူလုပျသညျ့ ငထူးရဲ့ အကွညျ့မြားကို သကျနှယျမွငျလိုကျရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သနျ့ဇငျရဲ့ သူငယျခငျြး သနျးဇျောဘေးတှငျ ဝငျကာ က လိုကျသညျ။ သနျးဇျောက အတူတူတှဲကရငျး သကျနှယျရဲ့ အိုးကွီးအား တဈခကျြတဈခကျြ လာကာပှတျသညျ။
သကျနှယျက သိသျောလညျး မသိခငျြယောငျဆောငျကာ နလေိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သနျးဖထျောက အတငျ့ရဲလာပွီး သူ့လီးနှငျ့ သကျနှယျအိုးကို ပှတျကာပှတျကာ ကနသေညျ သနျ့ဇငျကတော့ အရကျကို စှတျသောကျကာ တျောတျောမူးကာ မှောကျနပွေီဖွဈသညျ။ ထိုနောကျပှဲကို သိမျးကာ လှမျးခှဲလိုကျသညျ။ သနျ့ဇငျက အရမျးမူးနပွေီမို့ သနျးဇျောက သကျနှယျနှငျ့ သနျ့ဇငျကို လိုကျပို့သညျ။ အိမျရောကျတော့ သနျ့ဇငျကို အိမျ့ခနျးထဲသို့ တှဲပို့ပွီး နှဈယောကျသား ဧညျ့ခနျးထဲကို ထှကျခဲ့လိုကျသညျ။ “ခဏထိုငျးဦး နျော သနျးဇျော….. ငါသံမရာရညျ ဖြျောခဲ့မယျ နငျက အိမျပွနျရဦးမှာဆိုတော့” “အေး…… အေး…….”
ထိုနောကျသကျနှယျကမီးဖိုခနျးထဲသို့ဝငျသှားသညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျနောကျပိုငျးအလှကို ကွညျ့ရငျး ကနျြခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ ktv တှငျ စထားသော ဇာတျလမျးမှာ အခွနေကေောငျးနသေညျမို့ မီးဖိုခနျးထဲကို လိုကျသှားသညျ။ ထို့နောကျသကျနှယျကို နောကျမှဖကျရငျး လညျပငျးသားလေးကို နမျးလိုကျသညျ။ “သနျးဇျော နငျမညဈပတျနဲ့လဟော ငါက နငျ့သူငယျခငျြးရဲ့ မိနျးမလေ” “သကျ နှယျကလဲဟာ ငါကနငျ့ယောကျြား အကွောငျးကို ငါအသိဆုံးပါဟ……… နငျခုခြိနျလိုအပျနတေယျဆိုတာ ငါသိပါတယျ” “တျောစမျး ပါဟာ နငျထငျခငျြတာတှေ လြောကျထငျမနနေဲ့” သနျးဇျောက သကျနှယျကို ဆှဲလညျ့ကာ နှုတျခမျးလေးအား နမျးကာ စုပျလိုကျ သညျ။ သကျနှယျက ကတော့ ဘာမှမလုပျဘဲ ငွိမျနပွေီးမှ သနျးဇျောနှုတျခမျးတှကေို ပွနျကာ စုပျနမျးလာသညျ။ ထိုနရောရောကျပွီးမို့ သနျးဇျောလညျး အတငျ့ရဲလာပွီး သကျနှယျအိုးမြားကို ဖဈြညှဈလာသညျ။
သကျနှယျမှာ အသားကပျအကငြ်္ီအရှညျ ဝတျထားသညျမို့ တငျလေးက ကောကျကာ ရငျသားမြားက တငျးထှားနသေညျမို့ ဆကျဆီ ဖွဈလှနျးလှသညျ။ သနျးဇျောက နှုတျလမျးမြားကို နမျးတာ ရပျလိုကျပွီး လညျပငျးသားမြားကို နမျးကာ နို့မြားကို ကိုငျကာခြေ ပေးလိုကျသညျ။ သကျနှယျလညျး သနျ့ဇငျကြောကို ပှတျကာ နှုတျခမျးမြားကို ဟကာမကျြလုံးကို မှိတျပွီး အရသာ ခံနသေညျ။ အလှအပကို တနျဖိုးထားလှသော သကျနှယျမှာ ယခုခါမှာတော့ ဘာမှသတိမရတော့။ “အား…….. အား………… သနျးဇျော……… ဘာတှလေုပျနတောလဲဟာ……..” သနျးဇျောက သကျနှယျကို ခြီပွီး ဧညျ့ခနျးထဲကို ချေါလာသညျ။ မီးဖိုခနျးမှထှကျရငျး သနျ့ဇငျအိပျ့နေ သော အခနျးတံခါးကို တှနျးကာ ပိတျထားခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ ဆိုဖာပျေါတှငျ သကျနှယျကိုလဲကာ သကျနှယျနို့မြားကို အကငြ်္ီပျေါမှ နို့ မြားကို နှုတျခမျးနှငျ့ ပှတျကာ စုပျပေးလိုကျသညျ။
သကျနှယျကတော့ သနျးဇျော ခေါငျးကိုပှတျကာ လူးလှငျ့နသေညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျရဲ့ ပေါငျကွားလေးကို နှိကျကာ စောကျ ဖုတျလေးကို ပှတျပေးလိုကျသညျ။ သကျနှယျစောကျဖုတျလေးမှာ စောကျရညျမြား ထှကျကာ စိုနပွေီဖွဈသညျ။ အထိအတှကေို့မ လှနျဆနျနိုငျသော သကျနှယျမှာ အရာရာအားလုံးကို မကေ့ာ ကာမစိတျမြား တဈဟုနျထိုးတတျနသေညျ။ သနျးဇျောကတော့ သကျ နှယျရဲ့ ပငျတီလေးကိုကို နှိကျကာ စောကျစိလေးကို ပှတျကာခပြေေးရငျး နှုတျလမျးကို နမျးနသေညျ။ စောကျစိလေးကို နိုးဆှမှု ကွောငျ့ သကျနှယျမှာ သနျးဇျောရဲ့ လကျကိုဖမျးကိုငျကာ စောကျစိလေး သူမကိုယျတိုငျ ပှတျပေးနသေညျ။သနျးဇျောကဘအနမျးမြား ကို ရပျလိုကျပွီး သကျနှယျပငျတီလေးကို ခြှတျကာ ပေါငျးကားလေးထဲသို့ဝငျပွီး စောကျဖုတျလေးကို လြှာဖြားလေးနှငျ့ ယကျကာ ပေးလိုကျသညျ။ ကာမစိတျမြားအလှနျတတျနပွေီမို့ သကျနှယျစောကျဖုတျလေးမှာ စောကျရညျမြားရှဲစိုကာနသေညျ။
သနျးဇျောကလဲ စောကျဖုတျလေးကို လကျနှငျ့ဖွဲကာ စောကျစိလေးကို ထိထိမိမိယကျပေးလိုကျသညျ။ သနျးဇျောရဲ့ စောကျဖုတျယကျ ပိုငျနိုငျမှုကွောငျ့ သကျနှယျမှာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးလာသညျ။ “သနျးဇျော….. ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲဟာ……. ငါမရ တော့ဘူး……. ထှကျကုနျတော့မယျ……” “အား……… အား……….. အား…………” သနျးဇျောကတော့ သကျနှယျရဲ့စကားကို နားမ ထောငျပဲ စောကျစိလေးကို ယကျကာပွီး စောကျဖုတျလေးထဲသို့ လကျနှဈခြောငျးကိုထညျ့ကာ ဆှပေးလိုကျသညျ။ “အား………. အား………….. အား…………. အား………..” သကျနှယျမှာ ခါးကို ဆကျတိုကျကော့ကာ သနျးဇျောခေါငျးကို ပေါငျနှငျ့ညှပျရငျး ကာမ ပနျးတိုငျ အဆုံးသို့ရောကျကာ ပွီးသှားတော့သညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျပွီးသှားတော့မှာ သူမနှုတျခမျးလေးကို စောကျရညျမြား ပနေသေော နှုတျခမျးဖွငျ့လာနမျးသညျ။ သကျနျလဲ သူမစောကျရညျမြားနှငျ့ စိုနသေောနှုတျခမျးကို စုပျကာနမျးလိုကျသညျ။
သနျးဇျောက ဘောငျးဘီရှညျကို ခြှတျကာ သကျနှယျနှုတျခမျးနားသို့ သူ့လီးကို တပေ့ေးလိုကျသညျ။ သကျနှယျမှာ တဈခါမှ မစုပျပေး ဘူးသောကွောငျ့ မကျြနာကို လှဲကာ ရှောငျလိုကျသညျ။ သနျးဇျောက ခေါငျးကို ကိုငျကာ လီးကို နှုတျခမျးလေးနှငျ့ ပှတျပေးလိုကျ သညျ။ သကျနှယျလဲ ကာမစိတျဆူပှတျနသေူမို့ နျှတျခမျးလေးကို ဟကာ သနျးဇျောရဲ့ လီးကို စတငျစုပျပေးလိုကျသညျ။ တဈဖွဖွေေ နှငျ့ သနျးဇျောရဲ့လီးကို အာခေါငျထဲထိရောကျအောငျ စုပျပေးလိုကျသညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျအဆငျပွနေပွေီမို့ စုပျပေးတာကို မ စောငျ့တော့ပဲ ခေါငျးကိုကိုငျကာ သကျနှယျနှုတျခမျးလေးကို စတငျလိုးတော့သညျ။ သကျနှယျကတော့ ဘာမှငွငျးဆနျခှငျ့မရှိဘဲ သနျး ဇျောလုပျသမြှကို ခံနရေသညျ။
“အှတျ……… အှတျ………… အှတျ………. အှတျ……….” “အူး…… အူး…….. အူး……….” သနျးဇျောက လီးကို သကျနှယျပါးစပျထဲ တှငျအဆုံးထိဝငျအောငျ စောငျ့ထညျ့လိုကျပွီး ခေါငျးကို ကိုငျကာ ဖိထားလိုကျသညျ။ သကျနှယျ မကျြနာတဈခုလုံးနီရဲလာမှ လီးကို ထုပျပေးလိုကျသညျ။ထိုမှသကျနှယျလဲ အသကျကို ကောငျးကောငျးရှုရတော့သညျ။ သကျနှယျအဆငျပွလေောကျခြိနျတှငျ နောကျ တဈခါထပျထညျ့လိုကျသညျ။ ဒီတဈခါတှငျတော့ လီးကအရငျက ထကျပိုပွီးဝငျသှားသညျ။ “အူး………. အူး………. အူး……….. အူး………….” “အဟှတျ……. အဟှတျ……… အဟှတျ……….” ထိုနောကျသနျးဇျောက သကျနှယျရဲ့ အကငြ်္ီကို ခြှတျပေးလိုကျပွီး ဘ ရာကို ပါတဈခါထဲခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ပွီးမှာသကျနှယျပေါငျကားကို ဝငျကာ လီးကွီးဖွငျ့ သကျနှယျစောကျစိလေးအားပှတျကာ ပေးလိုကျသညျ။
“အား……….. အား……….. သနျး..ဇျော…… အား……. အား…………” သကျနှယျမှာ ခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာသညျ။ထိုမှ သနျးဇျောလဲ သကျနှယျစောကျဖုတျလေးထဲသို့ လီးတဈခြောငျးလုံး ထိုးထညျ့ကာ လိုကျလိုကျသညျ။ သကျနှယျမှာ အအိုဆိုပမေဲ့ အပြို စောကျဖုတျလေးလို တငျးကွပျကာနသေညျ။ သနျးဇျောလီးစောကျဖုတျလေးထဲ သို့ဝငျလာခြိနျတှငျ သကျနှယျမှာ ခါးကို ကောကာ အံကွိတျထားရသညျ။ သနျးဇျောကတော့ လီးဝငျသညျနှငျ့ သကျနှယျစောကျဖုတျလေးကို ပုံမှနျလေး စောငျ့ကာလိုးတော့သညျ။ သကျနှယျမြိာ လကျသီးစုပျပွီး ခေါငျးကို ဘယျညာရမျးကို ခံနရေသညျ။ “အား………. အား…………… အား……….. အား…………” သနျးဇျောကတော့ သကျနျဖွဈနပေုံလေးကို ကွညျ့ကာ ကနြေပျနသေညျ။ သကျနှယျစောကျဖုတျလေးမှာ လီးကို ညှဈညှဈပေးနေ သောကွောငျ့ အကွောမြားထဲထိစိမျ့အောငျကောငျးနသေညျ။
“သကျနှယျ…… နငျ့ယောကျြား နိုးလာရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ “ “ဟငျ……. အား…… အား……..” သကျနှယျက ခုမှသတိရသှားပွီး သနျးဇျောရငျဘကျကို တနျးကာ ရုနျးလာသညျ။ ထိုသို့ ရုနျးလာမှ သနျးဇျောက အခကျြစိပျစိပျလေး ဆောငျ့ကာ လိုးပေးလိုကျသညျ။ . . . သနျးဇျောလိုးခကျြမြားတှငျ သကျနှယျဘယျလိုမှရုနျးကနျနိုငျစှမျး မရှိတော့ပဲ ငွိမျနလေိုကျရသညျ။ အား……….အား………..အား……….. အား…….. “ဘယျလိုလဲသကျနှယျ နငျလိုခငျြတာ ဒါမြိုးမို့လား ဟငျ” “ဖွနျး……. ဖွနျး………. “ သနျးဇျောက တငျးရငျးနသေောနို့လေးနှဈလုံးကို တဈဖကျ တဈခကျြစီ ရဲနအေောငျရိုကျကာ စို့လိုကျသညျ။ ကာမစိတျမြားအလှနျ တတျနသေောကွောငျ့ သကျနှယျရဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးမှာ ထောငျနသေညျ။ သနျ့ဇငျနဲမတူသော လိုးခကျြမြားကွောငျ့ သကျနှယျမှာ ဝမျး နဲစိတျနှငျ့စှဲလမျးစိတျမြား ကွီးစိုးလာသညျ။ အလှပကျြမှာကွောကျသော သကျနှယျမှာ ခုခြိနျတှငျတော့ အလှအပမြာကို ဂရုမစိုကျနိုငျ တော့ခြေ။
“အား…….. အငျး……….. အငျး……….. အား………” သနျ့ဇငျလိုးနခြေိနျတှငျ အသံထှကျရမှာရှကျသော သကျနှယျမှာ သနျးဇျောရဲ့ လိုးခကျြမြားအောကျတှငျ ဧညျ့ခနျးတဈခုလုံး ဟိနျးနအေောငျ အျောညညျးနရေတော့သညျ။ သနျ့ဇငျမှာတော့ သူ့မယားလေးရဲ့ ရမကျ အျောသံမြားကိုပငျ မကွားရပဲ လောကကွီးနှငျ့ အဆကျသှယျပကျြနသေညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျအား ဆိုဖာပျေါတှငျ မှောကျ ခိုငျးလိုကျပွီး နောကျမှနေ၍ သကျနှယျရဲ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးထဲအား အကွောပွိုငျးပွိုငျးထနသေော လီးကွီးကို ထိုး ထညျ့ပွီး ခါးလေးကို ကိုငျကာ ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ သကျနှယျမှာ သနျ့ဇငျကဲ့သို့ မဟုတျပဲ ကွမျးကွမျးတနျးတနျး လိုးနသေော သနျးဇျောရဲ့လိုးခကျြမြားကို သာယာနသေညျ။ နောကျမှာ ဆောငျ့ကာ လိုးနသေော သနျးဇျောရဲီ့းမှာ သားအိမျသို့ လာကာ ထောကျမိ နသေောကွောငျ့ သကျနှယျမှာ မခံစားဖူးသော အရသာကို ခံရစားနရေသညျ။
“အား……….. အား………… သနျးဇျော………. သနျးဇျော……….” “ဘာလဲ သကျနှယျ ငါရပျလိုကျရတော့မှာလား……ဟငျ……. ဖွနျး……….” သနျးဇျောက ဆပျမလိုးပဲ သကျနှယျအိုးကွီးကို လကျဝါးဖွငျ့ ရိုကျလိုကျပွီး ရပျထားလိုကျသညျ။ “အား………….. အလို မဟုတျဘူးလေ………. ဆကျလုပျလေ…………” “ဘာလုပျရမှာလဲဟ………..” “နငျကလဲဟာ ဆကျလုပျပါဆို…” ထိုခါမှ သနျးဇျော က သကျနှယျရဲ့ ခါးလညျလောကျထိရှိသော ဆံပငျကို စုပျကိုငျကာ နောကျမှနပွေီးအသာကုနျ ဆောငျ့လိုးတော့သညျ။ သကျနှယျမှာ သနျးဇျောရဲ့ လိုးခကျြမြားကွောငျ့ ရှသေို့ ဆိုကျကာ ဆိုကျကာ ကသြှားသညျ။
“အား……. ……. အငျး………. အငျး……………” ပွှတျ……………. ပွှတျ……… ပွှတျ…………. ပွှတျ…………… ဖွောငျး……… ဖွောငျး……….. ဖွောငျး………. လိုးသံမြား က သနျ့ဇငျနှငျ့ သကျနှယျတို့အိမျလေးထဲတှငျ ကယျြလောငျစှာ ပြံနှံနသေညျ။ သကျနှယျ ကတော့ သနျးဇျောရဲ့ ဆောငျ့ ခကျြမြားတှငျ တခြီပွီးကာ စောကျရညျမြားစီကလြာသညျ။ သနျးဇျောလဲ သကျနှယျပွီးသှား သောကွောငျ့ စောကျဖုတျလေးမှ ညှဈလာသော ညှဈအားကို မခံနိုငျတော့ပဲ အသာကုနျဆောငျ့ပွီး သကျနှယျ၏ အိုးလေးပျေါတှငျ လ ရညျမြားကို ထုခလြိုကျတော့သညျ။ အား………. အား………….. အား………….. သနျးဇျောပွီးသှားမှ သကျနှယျလဲ မှောကျကာ ကြ သှားတော့သညျ။ သနျးဇျောကတော့ ဆိုဖာပျေါထိုငျကာ သကျနှယျခေါငျးမှ ဆံပငျလေးမြားကို ဖှလိုကျသညျ။
“သကျနှယျ…….. နငျငါနဲ့တှခေ့ငျြသေးရငျ ငါ့ဆီလာခဲ့နျော….. ငါခုပွနျတော့မယျ……. တျောကွာ နငျ့ယောကျြားနိုးလာနဦေးမယျ” သနျးဇျော သူ့အဝတျစားမြားကို ဝတျရငျးသကျနှယျအား ပွောလိုကျသညျ။ သကျနှယျကတော့ သနျးဇော့ခပျလာပေးသော ရခှေကျ လေးကို ကိုငျကာ ခေါငျးကို ငုံ့ထားသညျ။ သနျးဇျောကတော့ သကျနှယျကို ထားကာ ပွနျသှားတော့သညျ။ သကျနှယျမှာ သနျးဇျောနဲ့ ဖွဈပကျြခဲ့သမြှကို ပွနျတှေးကာ ဝမျးနညျး နရေသညျ။ သို့သျောလဲ သနျ့ဇငျဆီက မရရှိခဲ့သော ကာမအရသာကို ရရှိခဲ့သောကွောငျ့ ကနြေပျမှုလဲ ရရှိခဲ့ရသညျ။
သကျနှယျမှာ တှေးရငျး ငေးရငျးနှငျ့ သူမတကိုယျလုံးလဲ သနျးဇျောပယျပယျနယျနယျလိုးသှားသောကွောငျ့ ကိုငျရိုကျထားသလို နာကငျြနသေညျ။ သကျနှယျလဲ လနျးဆနျးသှားအောငျ ရခြေိုးမညျဟု့တှေးကာ ရခြေိုးခနျးထဲသို့ဝငျပွီး ရခြေိုးလိုကျသညျ။ ထိုခြိနျမှ သနျ့ဇငျတဈယောကျနိုးလာပွီး သူမရှသေို့ရောကျလာသညျ။ သနျးဇျောနှငျ့ သူ့အကွောငျးကိုသိသှားပွီး ဟုထငျကာ သကျနှယျမှာ တ ကိုယျလုံးတုနျရီးပွီး လနျ့နသေညျ။ ထို့နောကျ သနျ့ဇငျပွောသော စကားမြားနှငျ့ သူမဖွလေိုကျသော စကားမြားကိုပငျ မမှတျမိပဲ ထိပျ ထိပျလနျ့လနျ့နှငျ့ ရကေို သာ ဆကျခြိုးနသေညျ။ သနျ့ဇငျကတော့ အခနျးထဲသို့ ပွနျဝငျသှားကာ အိပျ့ပြျောသှားသညျ။ သကျနှယျမှာ တ ကိုယျလုံးကို ပှတျသပျကာ ဆေးကွောရငျး စောကျဖုတျနားလေးသို့ ရောကျသောအခါ သူမစောကျဖုတျလေးမှာ စောစောကလောကျ နာမနတေော့ပဲ ခံစားမှု တဈမြိုးကွောငျးလဲနသေညျ။ သကျနှယျက သူမစောကျဖုတျလေးကို ပှတျသပျကာ ဆေးကွောလိုကျခြိနျတှငျ တဈမတကိုယျလုံး တုနျရီကာ ကာမမီးမြားတောကျလောငျလာသညျ။
သကျနှယျမှာ တောကျလောငျလာသော ကာမမီးမြားကို ငွိမျးသကျဖို့မကွိုးစားပဲ ရမကျတဏှာနောကျကို ဆကျကာလိုကျသှားသညျ။ အား…………. အငျး…………… အငျး……………. အငျး………… သကျနှယျမှာ စောကျစိလေးကို သူမလကျခြောငျးကလေးမြားနှငျ့ ပှတျလိုကျပွီး သူမနို့မြားကိုလညျး ကနျြလကျတဈဖကျနှငျ့ ခနြေသေညျ။ သကျနှယျရခြေိုးခနျးထဲတှငျ သူမနောကျတဈခြီပွီးအောငျထိ စောကျစိကို ပှတျလိုကျသညျ။ ပွီးမှ သနျ့ဇငျဘေးတှငျ ဝငျကာ အိပျ့လိုကျသညျ။ သနျ့ဇငျကတော့ မနကျလငျးတှငျ ဘာမှမသိဘဲ အလုပျကို သာတနျးသှားလိုကျသညျ။ သကျနှယျကတော့ နအေတျောမွငျ့မှ အိပျ့ယာက နိုးလာသညျ။ မနညေ့က ကိစ်စကို ပြျောသလို ဝမျးနညျးသလို ခံစားနရေသညျ။ သို့သျောလညျး သူမတှငျ ငုတျလြှိုးနသေော ကာမဆန်ဒမြားမှာ ထိနျးမရအောငျပငျ တတျကွှ နသေညျ။
အိမျအလုပျမြားကို လုပျနသေျောလညျး သနျးဇျော လီးကို သာ တမျးတမိနသေညျ။ သနျးဇျောအကွောငျး စဉျးစားလိုကျသညျနှငျ့ သကျ နှယျစောကျဖုတျလေးမှာ အရေးလေးမြား ခကျြခငျြးစိုလာသညျ။ ~နာရီတိုငျး နရေ့ကျတိုငျးက မငျးပါကှာ နှလုံးသားထဲနငျသာ စိုးမိုး ထား~ “ဟလို…….. “ “အေး သကျနှယျ နငျနိုးပွီလား……” “သနျးဇျော နငျ့ငါ့ဆီကို ဘာလို့ ဖုနျး ဆကျတာလဲ” “နငျကလဲဟာ စိမျးကားလိုကျတာ ငါက နငျမနညေက အရှိနျကွောငျ့ အဆငျပွရေဲ့လားလို့ လှမျးမေးတာ” “အေး…. ပွတေယျ ဒါပဲမို့လား…..” “နေ….. နေ…. ပါဦးသကျနှယျရယျ နငျနဲ့ငါနဲ့ တှရေ့အောငျလို့ ပွောမလို့ပါဟ” “မတှခေ့ငျြဘူး…….. ခပြွီ” “ငါနလေ့ညျကရြငျ လာ ချေါမယျ…..” သကျနှယျက သနျးဇျောစကားကို ပငျ ဆုံးအောငျ နားမထောငျဘဲ ခလြိုကျတော့သညျ။ သနျးဇျော သူမကို ခြိနျးသညျကို ပြျောမိသျောလညျး သူ့ကို ကွောကျလဲ ကွောကျနသေညျ။
တဈသကျလုံး ပိပိရိရိနခေဲ့သော သကျနှယျမှာ သနျးဇျောနှငျ့ နောကျထပျ အတူတူလိုးဖို့ကို ကွောကျရှံနသေညျ။ သို့သျောလညျး သူမ၏ တဏှာရမကျမြားကတော့ ထှကွှသောငျး ကွမျးနလေပွေီ။ သကျနှယျ ရခြေိုးပွီးခြိနျတှငျတော့ သနျးဇျော ရောကျလာသညျ။ သနျးဇျောက သကျနှယျပို တှသေ့ညျနှငျ့ နှုတျခမျးလေးကို ဖကျကာ စုပျနမျးလိုကျသညျ။ သကျနှယျကတော့ ရုတျတရကျမို့လနျ့သှားပွီး သနျးဇျောကို ရိုကျပုတျကာ ရုနျးကနျနသေညျ။ သနျးဇျောက ရှတေို့းတိုးလာသောကွောငျ့ သကျနှယျမှာ နောကျဆုတျသှားပွိး အလိုလိုအိမျထဲရောကျသှားသညျ။အငျး……….. အငျး……………… အငျး…………… သနျးဇျောက အိမျထဲရောကျသညျနှငျ့ သကျနှယျ တငျသားမြားကို ကိုငျကာ စုပျနယျရငျး ဆကျကာ နမျးနလေိုကျသညျ။ သကျနှယျမှာ အိမျနရေငျးမို့ ပငျတီဝတျမထားမိဘဲ သနျးဇျော စုပျနယျလိုကျခြိနျတှငျ တငျသားမြားမှာအတိုငျးသာထိမိနသေညျ။ သကျနှယျမှာ တော့ မရုနျးကနျနိုငျတော့ဘဲ ငွိမျကာကသြှားသညျ။
ထိုခါမှ သနျးဇျောက သကျနှယျစောကျဖုတျလေးကို ထဘီအပျေါကနပွေီး အုပျကာ ပှတျပေးလိုကျသညျ။ သကျနှယျမှာ စောကျဖုတျ လေးကို လာထိသောကွောငျ့ ပေါငျလေး နှဈလုံးစိသှားပွီး သနျးဇျောလကျကိုခြုပျထားသလိုဖွဈသှားသညျ။ ထိုနောကျ သနျးဇျောက နှုတျခမျးလေးကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ “တျောပွီး သနျးဇျော…… နငျနဲ့ငါ ဆကျမဖွဈသငျ့ဘူး….” “အား…… အား…….” “သကျ နှယျရယျ နငျကသာ ငွငျးနတော နငျ့စောကျဖုတျလေးကတော့ အရညျတှကေို စိုလို့” “တျောပွီး သနျးဇျော နငျသှားတော့ဟာ” “သှား မှာပေါ့ သကျနှယျရဲ့…… လာ……..” သနျးဇျောက သကျနှယျကိုခြီပွီး သူမတို့လငျမယား နှဈယောကျအိပျ့သော အိပျ့ခနျးထဲသို့ ချေါလာ သညျ။ ပွီးမှ သကျနှယျကို ကုတငျပျေါတငျပွီး သကျနှယျထဘီလေးကို ဆှဲ ခြှတျလိုကျသညျ။ ပွီးမှ သကျနှယျပေါငျ ကွားလေးထဲဝငျ ကာ အရညျတှစေိုရှဲနသေော စောကျဖုတျလေးအား ဖွဲကာ စောကျစိလေးကို လြှာနှငျ့ ယကျကာပေးလိုကျသညျ။
သက်နွယ်မှာ ခုတစ်လောပိုင်း သန့်ဇင့်ရဲ့ မစွတ်မပွတ် လိုးချက်များကို အားမရတော့ပဲ ဆွပေးသလိုဖြစ်ကာ ပိုပိုပြီး အလိုးခံချင်လာသည်။ သန့်ဇင်မွေးနေ့တွင် သက်နွယ် အရက်များသောက်ကာ နဲနဲမူးလာချိန်တွင် သန့်ဇင်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖောင်းကြွနေသော နေရာများကိုကြည့်ကာ ကာမစိတ်များကြွလာသည်။ ထို့ကြောင့် အရက်များကို ဖိသောက်ပြီး မူးပြစ်လိုက်သည်။ အခန်းထဲ dj များဖွင့်ကာ တစ်ခန်းလုံး ကချိန်တွင် သက်နွယ်လဲ အလိုက်သင့်လိုက်ကလိုက်သည်။ ထိုချိန် ကိုနှင့်အလုပ်တူလုပ်သည့် ငထူးရဲ့ အကြည့်များကို သက်နွယ်မြင်လိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ဇင်ရဲ့ သူငယ်ချင်း သန်းဇော်ဘေးတွင် ဝင်ကာ က လိုက်သည်။ သန်းဇော်က အတူတူတွဲကရင်း သက်နွယ်ရဲ့ အိုးကြီးအား တစ်ချက်တစ်ချက် လာကာပွတ်သည်။
သက်နွယ်က သိသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ နေလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သန်းဖေထ်ာက အတင့်ရဲလာပြီး သူ့လီးနှင့် သက်နွယ်အိုးကို ပွတ်ကာပွတ်ကာ ကနေသည် သန့်ဇင်ကတော့ အရက်ကို စွတ်သောက်ကာ တော်တော်မူးကာ မှောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ပွဲကို သိမ်းကာ လွမ်းခွဲလိုက်သည်။ သန့်ဇင်က အရမ်းမူးနေပြီမို့ သန်းဇော်က သက်နွယ်နှင့် သန့်ဇင်ကို လိုက်ပို့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ သန့်ဇင်ကို အိမ့်ခန်းထဲသို့ တွဲပို့ပြီး နှစ်ယောက်သား ဧည့်ခန်းထဲကို ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ “ခဏထိုင်းဦး နော် သန်းဇော်….. ငါသံမရာရည် ဖျော်ခဲ့မယ် နင်က အိမ်ပြန်ရဦးမှာဆိုတော့” “အေး…… အေး…….”
ထိုနောက်သက်နွယ်ကမီးဖိုခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ktv တွင် စထားသော ဇာတ်လမ်းမှာ အခြေနေကောင်းနေသည်မို့ မီးဖိုခန်းထဲကို လိုက်သွားသည်။ ထို့နောက်သက်နွယ်ကို နောက်မှဖက်ရင်း လည်ပင်းသားလေးကို နမ်းလိုက်သည်။ “သန်းဇော် နင်မညစ်ပတ်နဲ့လေဟာ ငါက နင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ မိန်းမလေ” “သက် နွယ်ကလဲဟာ ငါကနင့်ယောက်ျား အကြောင်းကို ငါအသိဆုံးပါဟ……… နင်ခုချိန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်” “တော်စမ်း ပါဟာ နင်ထင်ချင်တာတွေ လျောက်ထင်မနေနဲ့” သန်းဇော်က သက်နွယ်ကို ဆွဲလည့်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းကာ စုပ်လိုက် သည်။ သက်နွယ်က ကတော့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေပြီးမှ သန်းဇော်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်ကာ စုပ်နမ်းလာသည်။ ထိုနေရာရောက်ပြီးမို့ သန်းဇော်လည်း အတင့်ရဲလာပြီး သက်နွယ်အိုးများကို ဖျစ်ညှစ်လာသည်။
သက်နွယ်မှာ အသားကပ်အင်္ကျီအရှည် ဝတ်ထားသည်မို့ တင်လေးက ကောက်ကာ ရင်သားများက တင်းထွားနေသည်မို့ ဆက်ဆီ ဖြစ်လွန်းလှသည်။ သန်းဇော်က နှုတ်လမ်းများကို နမ်းတာ ရပ်လိုက်ပြီး လည်ပင်းသားများကို နမ်းကာ နို့များကို ကိုင်ကာချေ ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်လည်း သန့်ဇင်ကျောကို ပွတ်ကာ နှုတ်ခမ်းများကို ဟကာမျက်လုံးကို မှိတ်ပြီး အရသာ ခံနေသည်။ အလှအပကို တန်ဖိုးထားလှသော သက်နွယ်မှာ ယခုခါမှာတော့ ဘာမှသတိမရတော့။ “အား…….. အား………… သန်းဇော်……… ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟာ……..” သန်းဇော်က သက်နွယ်ကို ချီပြီး ဧည့်ခန်းထဲကို ခေါ်လာသည်။ မီးဖိုခန်းမှထွက်ရင်း သန့်ဇင်အိပ့်နေ သော အခန်းတံခါးကို တွန်းကာ ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဆိုဖာပေါ်တွင် သက်နွယ်ကိုလဲကာ သက်နွယ်နို့များကို အင်္ကျီပေါ်မှ နို့ များကို နှုတ်ခမ်းနှင့် ပွတ်ကာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။
သက်နွယ်ကတော့ သန်းဇော် ခေါင်းကိုပွတ်ကာ လူးလွင့်နေသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ ပေါင်ကြားလေးကို နှိက်ကာ စောက် ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များ ထွက်ကာ စိုနေပြီဖြစ်သည်။ အထိအတွေ့ကိုမ လွန်ဆန်နိုင်သော သက်နွယ်မှာ အရာရာအားလုံးကို မေ့ကာ ကာမစိတ်များ တစ်ဟုန်ထိုးတတ်နေသည်။ သန်းဇော်ကတော့ သက် နွယ်ရဲ့ ပင်တီလေးကိုကို နှိက်ကာ စောက်စိလေးကို ပွတ်ကာချေပေးရင်း နှုတ်လမ်းကို နမ်းနေသည်။ စောက်စိလေးကို နိုးဆွမှု ကြောင့် သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ လက်ကိုဖမ်းကိုင်ကာ စောက်စိလေး သူမကိုယ်တိုင် ပွတ်ပေးနေသည်။သန်းဇော်ကဘအနမ်းများ ကို ရပ်လိုက်ပြီး သက်နွယ်ပင်တီလေးကို ချွတ်ကာ ပေါင်းကားလေးထဲသို့ဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်ကာ ပေးလိုက်သည်။ ကာမစိတ်များအလွန်တတ်နေပြီမို့ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များရွဲစိုကာနေသည်။
သန်းဇော်ကလဲ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှင့်ဖြဲကာ စောက်စိလေးကို ထိထိမိမိယက်ပေးလိုက်သည်။ သန်းဇော်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ယက် ပိုင်နိုင်မှုကြောင့် သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးလာသည်။ “သန်းဇော်….. ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲဟာ……. ငါမရ တော့ဘူး……. ထွက်ကုန်တော့မယ်……” “အား……… အား……….. အား…………” သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ရဲ့စကားကို နားမ ထောင်ပဲ စောက်စိလေးကို ယက်ကာပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်နှစ်ချောင်းကိုထည့်ကာ ဆွပေးလိုက်သည်။ “အား………. အား………….. အား…………. အား………..” သက်နွယ်မှာ ခါးကို ဆက်တိုက်ကော့ကာ သန်းဇော်ခေါင်းကို ပေါင်နှင့်ညှပ်ရင်း ကာမ ပန်းတိုင် အဆုံးသို့ရောက်ကာ ပြီးသွားတော့သည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ပြီးသွားတော့မှာ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို စောက်ရည်များ ပေနေသော နှုတ်ခမ်းဖြင့်လာနမ်းသည်။ သက်န်လဲ သူမစောက်ရည်များနှင့် စိုနေသောနှုတ်ခမ်းကို စုပ်ကာနမ်းလိုက်သည်။
သန်းဇော်က ဘောင်းဘီရှည်ကို ချွတ်ကာ သက်နွယ်နှုတ်ခမ်းနားသို့ သူ့လီးကို တေ့ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ တစ်ခါမှ မစုပ်ပေး ဘူးသောကြောင့် မျက်နာကို လွဲကာ ရှောင်လိုက်သည်။ သန်းဇော်က ခေါင်းကို ကိုင်ကာ လီးကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ပွတ်ပေးလိုက် သည်။ သက်နွယ်လဲ ကာမစိတ်ဆူပွတ်နေသူမို့ န်ှတ်ခမ်းလေးကို ဟကာ သန်းဇော်ရဲ့ လီးကို စတင်စုပ်ပေးလိုက်သည်။ တစ်ဖြေဖြေ နှင့် သန်းဇော်ရဲ့လီးကို အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်အဆင်ပြေနေပြီမို့ စုပ်ပေးတာကို မ စောင့်တော့ပဲ ခေါင်းကိုကိုင်ကာ သက်နွယ်နှုတ်ခမ်းလေးကို စတင်လိုးတော့သည်။ သက်နွယ်ကတော့ ဘာမှငြင်းဆန်ခွင့်မရှိဘဲ သန်း ဇော်လုပ်သမျှကို ခံနေရသည်။
“အွတ်……… အွတ်………… အွတ်………. အွတ်……….” “အူး…… အူး…….. အူး……….” သန်းဇော်က လီးကို သက်နွယ်ပါးစပ်ထဲ တွင်အဆုံးထိဝင်အောင် စောင့်ထည့်လိုက်ပြီး ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ဖိထားလိုက်သည်။ သက်နွယ် မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲလာမှ လီးကို ထုပ်ပေးလိုက်သည်။ထိုမှသက်နွယ်လဲ အသက်ကို ကောင်းကောင်းရှုရတော့သည်။ သက်နွယ်အဆင်ပြေလောက်ချိန်တွင် နောက် တစ်ခါထပ်ထည့်လိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင်တော့ လီးကအရင်က ထက်ပိုပြီးဝင်သွားသည်။ “အူး………. အူး………. အူး……….. အူး………….” “အဟွတ်……. အဟွတ်……… အဟွတ်……….” ထိုနောက်သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးလိုက်ပြီး ဘ ရာကို ပါတစ်ခါထဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှာသက်နွယ်ပေါင်ကားကို ဝင်ကာ လီးကြီးဖြင့် သက်နွယ်စောက်စိလေးအားပွတ်ကာ ပေးလိုက်သည်။
“အား……….. အား……….. သန်း..ဇော်…… အား……. အား…………” သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာသည်။ထိုမှ သန်းဇော်လဲ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီးတစ်ချောင်းလုံး ထိုးထည့်ကာ လိုက်လိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ အအိုဆိုပေမဲ့ အပျို စောက်ဖုတ်လေးလို တင်းကြပ်ကာနေသည်။ သန်းဇော်လီးစောက်ဖုတ်လေးထဲ သို့ဝင်လာချိန်တွင် သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကောကာ အံကြိတ်ထားရသည်။ သန်းဇော်ကတော့ လီးဝင်သည်နှင့် သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို ပုံမှန်လေး စောင့်ကာလိုးတော့သည်။ သက်နွယ်မျိာ လက်သီးစုပ်ပြီး ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းကို ခံနေရသည်။ “အား………. အား…………… အား……….. အား…………” သန်းဇော်ကတော့ သက်န်ဖြစ်နေပုံလေးကို ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေသည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေ သောကြောင့် အကြောများထဲထိစိမ့်အောင်ကောင်းနေသည်။
“သက်နွယ်…… နင့်ယောက်ျား နိုးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ “ “ဟင်……. အား…… အား……..” သက်နွယ်က ခုမှသတိရသွားပြီး သန်းဇော်ရင်ဘက်ကို တန်းကာ ရုန်းလာသည်။ ထိုသို့ ရုန်းလာမှ သန်းဇော်က အချက်စိပ်စိပ်လေး ဆောင့်ကာ လိုးပေးလိုက်သည်။ . . . သန်းဇော်လိုးချက်များတွင် သက်နွယ်ဘယ်လိုမှရုန်းကန်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ အား……….အား………..အား……….. အား…….. “ဘယ်လိုလဲသက်နွယ် နင်လိုချင်တာ ဒါမျိုးမို့လား ဟင်” “ဖြန်း……. ဖြန်း………. “ သန်းဇော်က တင်းရင်းနေသောနို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်ဖက် တစ်ချက်စီ ရဲနေအောင်ရိုက်ကာ စို့လိုက်သည်။ ကာမစိတ်များအလွန် တတ်နေသောကြောင့် သက်နွယ်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ထောင်နေသည်။ သန့်ဇင်နဲမတူသော လိုးချက်များကြောင့် သက်နွယ်မှာ ဝမ်း နဲစိတ်နှင့်စွဲလမ်းစိတ်များ ကြီးစိုးလာသည်။ အလှပျက်မှာကြောက်သော သက်နွယ်မှာ ခုချိန်တွင်တော့ အလှအပမျာကို ဂရုမစိုက်နိုင် တော့ချေ။
“အား…….. အင်း……….. အင်း……….. အား………” သန့်ဇင်လိုးနေချိန်တွင် အသံထွက်ရမှာရှက်သော သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ လိုးချက်များအောက်တွင် ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံး ဟိန်းနေအောင် အော်ညည်းနေရတော့သည်။ သန့်ဇင်မှာတော့ သူ့မယားလေးရဲ့ ရမက် အော်သံများကိုပင် မကြားရပဲ လောကကြီးနှင့် အဆက်သွယ်ပျက်နေသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်အား ဆိုဖာပေါ်တွင် မှောက် ခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်မှနေ၍ သက်နွယ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲအား အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးကြီးကို ထိုး ထည့်ပြီး ခါးလေးကို ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ သန့်ဇင်ကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်း လိုးနေသော သန်းဇော်ရဲ့လိုးချက်များကို သာယာနေသည်။ နောက်မှာ ဆောင့်ကာ လိုးနေသော သန်းဇော်ရဲီ့းမှာ သားအိမ်သို့ လာကာ ထောက်မိ နေသောကြောင့် သက်နွယ်မှာ မခံစားဖူးသော အရသာကို ခံရစားနေရသည်။
“အား……….. အား………… သန်းဇော်………. သန်းဇော်……….” “ဘာလဲ သက်နွယ် ငါရပ်လိုက်ရတော့မှာလား……ဟင်……. ဖြန်း……….” သန်းဇော်က ဆပ်မလိုးပဲ သက်နွယ်အိုးကြီးကို လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်လိုက်ပြီး ရပ်ထားလိုက်သည်။ “အား………….. အလို မဟုတ်ဘူးလေ………. ဆက်လုပ်လေ…………” “ဘာလုပ်ရမှာလဲဟ………..” “နင်ကလဲဟာ ဆက်လုပ်ပါဆို…” ထိုခါမှ သန်းဇော် က သက်နွယ်ရဲ့ ခါးလည်လောက်ထိရှိသော ဆံပင်ကို စုပ်ကိုင်ကာ နောက်မှနေပြီးအသာကုန် ဆောင့်လိုးတော့သည်။ သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ လိုးချက်များကြောင့် ရှေ့သို့ ဆိုက်ကာ ဆိုက်ကာ ကျသွားသည်။
“အား……. ……. အင်း………. အင်း……………” ပြွတ်……………. ပြွတ်……… ပြွတ်…………. ပြွတ်…………… ဖြောင်း……… ဖြောင်း……….. ဖြောင်း………. လိုးသံများ က သန့်ဇင်နှင့် သက်နွယ်တို့အိမ်လေးထဲတွင် ကျယ်လောင်စွာ ပျံနှံနေသည်။ သက်နွယ် ကတော့ သန်းဇော်ရဲ့ ဆောင့် ချက်များတွင် တချီပြီးကာ စောက်ရည်များစီကျလာသည်။ သန်းဇော်လဲ သက်နွယ်ပြီးသွား သောကြောင့် စောက်ဖုတ်လေးမှ ညှစ်လာသော ညှစ်အားကို မခံနိုင်တော့ပဲ အသာကုန်ဆောင့်ပြီး သက်နွယ်၏ အိုးလေးပေါ်တွင် လ ရည်များကို ထုချလိုက်တော့သည်။ အား………. အား………….. အား………….. သန်းဇော်ပြီးသွားမှ သက်နွယ်လဲ မှောက်ကာ ကျ သွားတော့သည်။ သန်းဇော်ကတော့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ကာ သက်နွယ်ခေါင်းမှ ဆံပင်လေးများကို ဖွလိုက်သည်။
“သက်နွယ်…….. နင်ငါနဲ့တွေ့ချင်သေးရင် ငါ့ဆီလာခဲ့နော်….. ငါခုပြန်တော့မယ်……. တော်ကြာ နင့်ယောက်ျားနိုးလာနေဦးမယ်” သန်းဇော် သူ့အဝတ်စားများကို ဝတ်ရင်းသက်နွယ်အား ပြောလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ သန်းဇော့ခပ်လာပေးသော ရေခွက် လေးကို ကိုင်ကာ ခေါင်းကို ငုံ့ထားသည်။ သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ကို ထားကာ ပြန်သွားတော့သည်။ သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်နဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ပြန်တွေးကာ ဝမ်းနည်း နေရသည်။ သို့သော်လဲ သန့်ဇင်ဆီက မရရှိခဲ့သော ကာမအရသာကို ရရှိခဲ့သောကြောင့် ကျေနပ်မှုလဲ ရရှိခဲ့ရသည်။
သက်နွယ်မှာ တွေးရင်း ငေးရင်းနှင့် သူမတကိုယ်လုံးလဲ သန်းဇော်ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးသွားသောကြောင့် ကိုင်ရိုက်ထားသလို နာကျင်နေသည်။ သက်နွယ်လဲ လန်းဆန်းသွားအောင် ရေချိုးမည်ဟု့တွေးကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်ပြီး ရေချိုးလိုက်သည်။ ထိုချိန်မှ သန့်ဇင်တစ်ယောက်နိုးလာပြီး သူမရှေ့သို့ရောက်လာသည်။ သန်းဇော်နှင့် သူ့အကြောင်းကိုသိသွားပြီး ဟုထင်ကာ သက်နွယ်မှာ တ ကိုယ်လုံးတုန်ရီးပြီး လန့်နေသည်။ ထို့နောက် သန့်ဇင်ပြောသော စကားများနှင့် သူမဖြေလိုက်သော စကားများကိုပင် မမှတ်မိပဲ ထိပ် ထိပ်လန့်လန့်နှင့် ရေကို သာ ဆက်ချိုးနေသည်။ သန့်ဇင်ကတော့ အခန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်သွားကာ အိပ့်ပျော်သွားသည်။ သက်နွယ်မှာ တ ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ကာ ဆေးကြောရင်း စောက်ဖုတ်နားလေးသို့ ရောက်သောအခါ သူမစောက်ဖုတ်လေးမှာ စောစောကလောက် နာမနေတော့ပဲ ခံစားမှု တစ်မျိုးကြောင်းလဲနေသည်။ သက်နွယ်က သူမစောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်ကာ ဆေးကြောလိုက်ချိန်တွင် တစ်မတကိုယ်လုံး တုန်ရီကာ ကာမမီးများတောက်လောင်လာသည်။
သက်နွယ်မှာ တောက်လောင်လာသော ကာမမီးများကို ငြိမ်းသက်ဖို့မကြိုးစားပဲ ရမက်တဏှာနောက်ကို ဆက်ကာလိုက်သွားသည်။ အား…………. အင်း…………… အင်း……………. အင်း………… သက်နွယ်မှာ စောက်စိလေးကို သူမလက်ချောင်းကလေးများနှင့် ပွတ်လိုက်ပြီး သူမနို့များကိုလည်း ကျန်လက်တစ်ဖက်နှင့် ချေနေသည်။ သက်နွယ်ရေချိုးခန်းထဲတွင် သူမနောက်တစ်ချီပြီးအောင်ထိ စောက်စိကို ပွတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သန့်ဇင်ဘေးတွင် ဝင်ကာ အိပ့်လိုက်သည်။ သန့်ဇင်ကတော့ မနက်လင်းတွင် ဘာမှမသိဘဲ အလုပ်ကို သာတန်းသွားလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ နေအတော်မြင့်မှ အိပ့်ယာက နိုးလာသည်။ မနေ့ညက ကိစ္စကို ပျော်သလို ဝမ်းနည်းသလို ခံစားနေရသည်။ သို့သော်လည်း သူမတွင် ငုတ်လျှိုးနေသော ကာမဆန္ဒများမှာ ထိန်းမရအောင်ပင် တတ်ကြွ နေသည်။
အိမ်အလုပ်များကို လုပ်နေသော်လည်း သန်းဇော် လီးကို သာ တမ်းတမိနေသည်။ သန်းဇော်အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် သက် နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရေးလေးများ ချက်ချင်းစိုလာသည်။ ~နာရီတိုင်း နေ့ရက်တိုင်းက မင်းပါကွာ နှလုံးသားထဲနင်သာ စိုးမိုး ထား~ “ဟလို…….. “ “အေး သက်နွယ် နင်နိုးပြီလား……” “သန်းဇော် နင့်ငါ့ဆီကို ဘာလို့ ဖုန်း ဆက်တာလဲ” “နင်ကလဲဟာ စိမ်းကားလိုက်တာ ငါက နင်မနေညက အရှိန်ကြောင့် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ လှမ်းမေးတာ” “အေး…. ပြေတယ် ဒါပဲမို့လား…..” “နေ….. နေ…. ပါဦးသက်နွယ်ရယ် နင်နဲ့ငါနဲ့ တွေ့ရအောင်လို့ ပြောမလို့ပါဟ” “မတွေ့ချင်ဘူး…….. ချပြီ” “ငါနေ့လည်ကျရင် လာ ခေါ်မယ်…..” သက်နွယ်က သန်းဇော်စကားကို ပင် ဆုံးအောင် နားမထောင်ဘဲ ချလိုက်တော့သည်။ သန်းဇော် သူမကို ချိန်းသည်ကို ပျော်မိသော်လည်း သူ့ကို ကြောက်လဲ ကြောက်နေသည်။
တစ်သက်လုံး ပိပိရိရိနေခဲ့သော သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်နှင့် နောက်ထပ် အတူတူလိုးဖို့ကို ကြောက်ရွံနေသည်။ သို့သော်လည်း သူမ၏ တဏှာရမက်များကတော့ ထွကြွသောင်း ကြမ်းနေလေပြီ။ သက်နွယ် ရေချိုးပြီးချိန်တွင်တော့ သန်းဇော် ရောက်လာသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ပို တွေ့သည်နှင့် နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖက်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ ရုတ်တရက်မို့လန့်သွားပြီး သန်းဇော်ကို ရိုက်ပုတ်ကာ ရုန်းကန်နေသည်။ သန်းဇော်က ရှေ့တိုးတိုးလာသောကြောင့် သက်နွယ်မှာ နောက်ဆုတ်သွားပြိး အလိုလိုအိမ်ထဲရောက်သွားသည်။အင်း……….. အင်း……………… အင်း…………… သန်းဇော်က အိမ်ထဲရောက်သည်နှင့် သက်နွယ် တင်သားများကို ကိုင်ကာ စုပ်နယ်ရင်း ဆက်ကာ နမ်းနေလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ အိမ်နေရင်းမို့ ပင်တီဝတ်မထားမိဘဲ သန်းဇော် စုပ်နယ်လိုက်ချိန်တွင် တင်သားများမှာအတိုင်းသာထိမိနေသည်။ သက်နွယ်မှာ တော့ မရုန်းကန်နိုင်တော့ဘဲ ငြိမ်ကာကျသွားသည်။
ထိုခါမှ သန်းဇော်က သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီအပေါ်ကနေပြီး အုပ်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ စောက်ဖုတ် လေးကို လာထိသောကြောင့် ပေါင်လေး နှစ်လုံးစိသွားပြီး သန်းဇော်လက်ကိုချုပ်ထားသလိုဖြစ်သွားသည်။ ထိုနောက် သန်းဇော်က နှုတ်ခမ်းလေးကို လွတ်ပေးလိုက်သည်။ “တော်ပြီး သန်းဇော်…… နင်နဲ့ငါ ဆက်မဖြစ်သင့်ဘူး….” “အား…… အား…….” “သက် နွယ်ရယ် နင်ကသာ ငြင်းနေတာ နင့်စောက်ဖုတ်လေးကတော့ အရည်တွေကို စိုလို့” “တော်ပြီး သန်းဇော် နင်သွားတော့ဟာ” “သွား မှာပေါ့ သက်နွယ်ရဲ့…… လာ……..” သန်းဇော်က သက်နွယ်ကိုချီပြီး သူမတို့လင်မယား နှစ်ယောက်အိပ့်သော အိပ့်ခန်းထဲသို့ ခေါ်လာ သည်။ ပြီးမှ သက်နွယ်ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး သက်နွယ်ထဘီလေးကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သက်နွယ်ပေါင် ကြားလေးထဲဝင် ကာ အရည်တွေစိုရွဲနေသော စောက်ဖုတ်လေးအား ဖြဲကာ စောက်စိလေးကို လျှာနှင့် ယက်ကာပေးလိုက်သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကိုယျ့လီးက မငျးအတှကျပါ